We.com.mm - ကိုရီးယားစတိုင် ငါးအူချောင်း တော့ပိုကီ အစပ်ဟင်းရည်
ကိုရီးယားစတိုင် ငါးအူချောင်း တော့ပိုကီ အစပ်ဟင်းရည်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကိုရီးယးလူမျိုးတွေ အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ငါးအူချောင်းနဲ့ တော့ပိုကီကို အရည်အစပ်လေးနဲ့ ချက်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ ငါးအူချောင်းနဲ့တော့ပိုကီကိုတော့ City Mart တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်နော်။ ဒီတော့ အစားအသောက်ချစ်သူတွေ ခံတွင်းတွေ့မယ့် အစပ်ဟင်းရည်ချက်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ငါးအူချောင်း ( ၃ ချောင်း )
၂. တော့ပိုကီ ( ၁ ထုပ် )
၃. ငရုပ်ဆီအနှစ် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း )
၄. ငရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၅. တရုတ်ပဲငံပြာရည် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၆. ကိုရီးယားငါးငံပြာရည် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၇. သကြား ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၈. မရမ်းသီးအနှစ် ( စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း )
၉. ပဲပင်ပေါက် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ပဲပင်ပေါက်ကို ရေနွေးဖျောပြီးဆယ်ထားလိုုက်ပါ။
၂. ငါးအူချောင်းရယ်တော့ပိုကီမှ လွဲလို့ ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး ဖျော်လိုက်ပါ။
၃. ချက်မယ့် အိုးထဲသို့ ရေထည့်ပြီး ရေဆူအိုးတည်ထားပါ။ ရေတွေ ပွက်ပွက်ဆူလာရင် ဖျောထားတဲ့ ငရုပ်ဆီအနှစ်တွေကို ထည့်လိုက်ပြီး မွှေလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် ငါးအူချောင်းတွေနဲ့တော့ပိုကီတွေကို ထည့်လိုက်ပါ။
၄. နည်းနည်းကြာလာရင် အိုးပွက်ပွက်ဆူလာလိမ့်ပါ့မယ်။ ဆူတာကြာလေ ဟင်းရည်ကလည်း ရဲလာပြီး ပျစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲကျရင် အိုးချပြီး စားလို့ရပါပြီနော်။ စားခါနီးမှ ပဲပင်ပေါက်တွေကို ထည့်ပါနော်။ ဒါဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ ကိုရီးယားစတိုင် ငါးအူချောင်း တော့ပိုကီ အစပ်ဟင်းရည်လေးကို စားလို့ရပါပြီနော်။
Iced Freddo ဖျော်စပ်နည်း
ကြက်ကြော်ဆိုင်တွေကလို အရသာရှိပြီး လွယ်ကူတဲ့ ကြက်ကြော်နည်း
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတဲ့ ပန်းသီးရှာလကာရည်